त्रिशुली नदी माथि बनिरहेको पुलको ८० मिटर भाग भत्कियो त्रिशुली नदी माथि बनिरहेको पुलको ८० मिटर भाग भत्कियो - Akhabar Nepal त्रिशुली नदी माथि बनिरहेको पुलको ८० मिटर भाग भत्कियो - Akhabar Nepal
त्रिशुली नदी माथि बनिरहेको...
त्रिशुली नदी माथि बनिरहेको पुलको ८० मिटर भाग भत्कियो
२०७७, २४ चैत्र मंगलवार १०:३६
काठमाडौं: त्रिशुली नदी माथि बनिरहेको पुलको ८० मिटर भाग भत्किएको हो । चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्न बनिरहेको पुल भत्किएको हो।
इलाइट, एड्भेन्चर र इन्द्रेणी जेभी गरी तीन कम्पनी मिलेर बनाउँदै गरेको २२० मिटर लामो र ८.५ मिटर चौडाइको पुलको पिलरको काम सकिएको थियो । पुल ढलान गरेको २१ दिनको दिनमा भत्किएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार प्रिस्टेसिङका क्रममा रहेको ४० मिटरको पुल भत्किदा अर्को बनिसकेको ४० मिटर भागसमेत भत्किएको छ । साधारणतया २८ दिनमा पुलको ढलानका सपोर्ट निकाल्ने गरिन्छ ।
पुलको चारवटा स्पानमध्ये मुख्य भागमा ८० मिटर लामो स्टिलको ट्रस्ट संरचना बन्दै थियो । सो ट्रसलाई लिफ्ट गर्दा ढलान गरिएको पुलमा धक्का दिँदा भत्किएको हुनसक्ने र यस बारेमा थप अनुसन्धान भैरहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ ठिमुरादेखि देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ को घिनटार जोड्न त्रिशुली नदी माथि बन्दै गरेको पुलको ६ वर्षअघि शिलान्यास गरिएको थियो । २०७१ कात्तिक २० गते ठेक्का सम्झौता भएको पुल २०७४ कात्तिक २० गते भित्र बनाइसक्नुपर्ने थियो ।
सुरुमा १६ करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको पुलको डिजाइन ‘रिभ्यू’ गरेर २१ करोड ६८ लाख पुर्याईएको छ । डिजाइन संशोधनमा १८ महिना, भूकम्पमा ६ महिना र नाकाबन्दीमा ३ महिना काम रोकिएको थियो । दुई पटक म्याद थप गरिएको पुलको सम्झौता अवधि पुस १३ गते सकिएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई देखाउँदै फेरि म्याद थप गरिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्धारित समयमा काम नसकेको, पटक–पटक डिजाइन फेरेको र काम ढिलो हुँदा लागत रकम बढेकोबारे सडक डिभिजन कार्यालयसँग जवाफ माग गरेको थियो ।